पैसा कहाँ राख्ने ?
nepalnamcha.com२०७८ जेष्ठ १०
पैसा कहाँ राख्ने ? कसैले पैसा बाकसमा राख्छन् त कसैले ओछ्यानमुनि वा तकियामुनि राख्छन् । कसै कसैले पैसा प्लाष्टिकले बेरेर माटोमुनि छोपेर राख्ने गरेको पनि देख्नु भएको होला । कतिपय मानिसहरु खल्तीमा वा पर्समा पैसा राख्न मन पराउँछन् । पैसा राख्ने यी सबै तरिकाहरु ठिक होइनन् ।
पैसा बाकसमा वा ओछ्यानमुनि राख्दा आफु घरमा नभएका वेला चोरी हुने डर हुन्छ । पैसा जथाभावी राख्दा मुसाले पनि काट्न सक्दछ । खल्तीमा वा पर्समा पैसा राख्दा बाटोमा हिंडिरहँदा वा बसभित्र भिडभाड बढेको वेला पैसा चोरिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले आफुलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम मात्र खल्ती वा पर्समा बोक्नु उपयुक्त हुनछ । कतिपय मानिसहरु प्लाष्टिकले पैसा बेरेर राख्दा सुरक्षित हुने ठान्छन्, तर त्यो पनि पैसा राख्ने गलत तरिका हो । त्यसो गर्दा माटोबाट ओस छिरेर पैसा बिग्रन सक्छ वा नोटलाई धमिराले खान पनि सक्छ ।
त्यसो भए पैसा सुरक्षित कसरी राख्ने त ? आफुलाई चाहिएका वेला सजिलै झिक्न सकिने र आफुसँग भएको बचत सजिलै सुरक्षित तरिकाले राख्न सकिने गरी पैसा राख्ने गर्नु पर्छ । त्यस्तो पैसा राख्ने ठाउँलाई बैंक भन्दछन् । बैंकहरुले मानिसका पैसा सुरक्षित राखी दिने गर्दछन् । खेतीपाती गर्ने र श्रम गर्ने सामान्य मानिसदेखि विद्यार्थी, व्यापारी र कार्यालयहरुमा काम गर्ने मानिसहरु समेत बैंकमा पैसा राख्दछन् ।
कुनै मानिसले आफुले राखेको पैसा झिक्न जाँदा बैंकले आज पैसा छैन, भोलि आउनु भनेको कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? कुनै पनि बैंकले त्यसो भन्न पाउँदैन । अर्को ठूलो बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरुको कामकारवाहीको निगरानी गरिराखेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारकोतर्फबाट स्थापना गरिएको बैंक हो । सर्वसाधारणले लेनदेनमा अरु बैंकबाट दुख नपाउन भनेर सरकारले यो बैंक खोलेको हो ।
घरमा पैसा राख्दा पैसा बढ्दैन । खर्च भई बचत भएको पैसा बैंकमा राख्यो भने बढ्दै जान्छ, कसरी बढ्छ, थाहा छ ? बैंकले बचतकर्तालाई ब्याज दिन्छ र त्यो ब्याज हाम्रो बचतमा थपिंदै जान्छ । बैंकले सयकडा आठका दरले ब्याज दियो भने एकवर्षपछि हामीले राखेको सय रुपैया“ बढेर एकसय आठ हुन्छ । ल भन्नुहोस् त अब पैसा घरमै राख्दा राम्रो कि बैंकमा जम्मा गर्दा राम्रो ?
बैंकमा पैसा राख्नु पर्यो भने आफुलाई पाएक पर्ने नजिकैको बैंकमा जानुपर्छ र आफ्नो नाउँमा खाता खोल्नु पर्छ । खाता खोल्न बैंकका कर्मचारीले सहयोग गर्छन् । तपाईं स्कूल पढ्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो बाबा वा आमालाई लिएर बैंकमा जानु पर्दछ । तपाईं क्याम्पस पढ्दै हनुहुन्छ भने खाता खोल्न एकलै गए पनि हुन्छ । बैंकका कर्मचारीले मागेका कागजपत्रहरु बुझाएर बैंकमा खाता खोली पैसा राख्न सकिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएसम्म आफ्नो संरक्षकको रोहबरमा मात्र बैंकले खाता खोल्छ ।
बैंकमा पैसा राखेर मात्र हुँदैन । आफुलाई चाहिएका बखत सजिलै झिक्न सकिने पनि हुनुपर्दछ । बैंकबाट पैसा झिक्ने दुई ओटा तरिकाहरु छन् । बैंकले तपाईंको नाममा एउटा चेकबूक दिन्छ । चेकको एउटा पानामा आपूmलाई चाहिएको रकम भरेर दस्तखत गरी पैसा झिक्न सकिन्छ । अर्को अझ सजिलो तरिका छ । बैंकसँग माग गरेको खण्डमा बैंकले अचेल एउटा डिजिटल कार्ड दिन्छ, त्यसलाई एटीएम वा भिसा कार्ड पनि भन्दछन् । डिजिटल कार्ड प्रयोग गर्दा केही महत्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ । पहिलो कुरा, यसलाई ज्यादै सुरक्षित राख्नु पर्दछ । दोस्रो, एटीएम मेशिनबाट पैसा झिक्न डिजिटल कार्ड इन्सर्ट गर्दा पासवर्ड चाहिन्छ ।
पासवर्ड गोप्य संकेत हो, यो ज्यादै गोप्य तरिकाले राख्नु पर्दछ र एटीएमबाट पैसा झिक्नु पर्दा सधैँ सम्झनु पर्दछ ।